Rise of the Guardians (2012) | MM Movie Store
Director: Peter Ramsey ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပြီးNovember 21, 2012 (USA) မှာ ရုံတင်ခဲ့တဲ့ လူကြီးရော ကလေးပါ ကြည့်သင့်တဲ့ယုံကြည်မှု စိတ်ဓါတ်ရေးရာ မြင့်တင်ပေးပြီး စိတ်ဓါတ်ခွန်အား ရရှိစေမယ့် နတ်သမီး ပုံပြင်အခြေခံကာတွန်းဇတ်လမ်းလေး ဖြစ်ပါတယ်…
ဇတ်လမ်းပုံစံကတော့ ကြင်နာတက်တဲ့ စိတ်ထားရှိတဲ့ ဂျက်ဖရော့ဒ်ဟာ လူသား ဘ၀ မှာ သူရဲ့ ညီမလေးကို ကယ်ဆယ်ဖို့ သူ့အသက်ကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့ပြီး ရေခဲပြင်ထဲမှာ သေဆုံးသွားပါတယ်…တစ်ရက်သော လပြည့်ညမှာတော့ လနတ်သား ဟာ ဂျက်ဖရော့ဒ် ကိုသေရွာကနေ နှိုးယူပြီး လူသားကလေးတွေ ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ဆောင်ကျဉ်းပေးမယ့်နှင်းလူသား အဖြစ် ဖန်တီး ပေးလိုက်ပါတယ်….
ဂျက်ဖရော့ဒ် ရဲ့ အတိတ်ဘ၀ မှတ်ဉာဏ်ကို ဖျောက်ထားခဲ့တဲ့အတွက်၎င်း ကိုယ်တိုင် စိတ်ထားကောင်းမွန်တဲ့ ကောင်လေး တစ်ယောက်ဆိုတာ မသိခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့် သူ့ကိုသူ နတ်ဆိုး တစ်ယောက်လို့ မှတ်ယူပြီး လေလွင့်နေတုန်းဆန်တာကလော့ တို့ အက်စတာဘန်နီ တို့ အပြင် အိပ်မက်ဖန်ဆင်းရှင် သဲလူသား နဲ့သွားနတ်သမီး တို့ ကို တွေ့ဆုံလိုက်ရပြီး
၎င်းတို့ နဲ့ အတူ ကလေးတွေ ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှု ယုံကြည်မှု ကိုလိုက်လံ ဆောင်ရွတ်နေရင်း နဲ့ ကလေးတွေ ကို ညဘက် အိပ်မက်ဆိုးတွေ ပေးမက်နေတဲ့Dream Worker နတ်ဆိုး ရဲ့ ညစ်ပတ်လှတဲ့ လှည့်ကွက်တွေနဲ့ သူတို့ အဖွဲ့ တွေ့ကြုံလိုက်ရတဲ့အခါ……
Director: Peter Ramsey ႐ိုက္ကူးတင္ဆက္ထားၿပီးNovember 21, 2012 (USA) မွာ ႐ုံတင္ခဲ့တဲ့ လူႀကီးေရာ ကေလးပါ ၾကည့္သင့္တဲ့ယုံၾကည္မႈ စိတ္ဓါတ္ေရးရာ ျမင့္တင္ေပးၿပီး စိတ္ဓါတ္ခြန္အား ရရွိေစမယ့္ နတ္သမီး ပုံျပင္အေျခခံကာတြန္းဇတ္လမ္းေလး ျဖစ္ပါတယ္…
ဇတ္လမ္းပုံစံကေတာ့ ၾကင္နာတက္တဲ့ စိတ္ထားရွိတဲ့ ဂ်က္ဖေရာ့ဒ္ဟာ လူသား ဘ၀ မွာ သူရဲ႕ ညီမေလးကို ကယ္ဆယ္ဖို႔ သူ႔အသက္ကိုစြန႔္လႊတ္ခဲ့ၿပီး ေရခဲျပင္ထဲမွာ ေသဆုံးသြားပါတယ္…တစ္ရက္ေသာ လျပည့္ညမွာေတာ့ လနတ္သား ဟာ ဂ်က္ဖေရာ့ဒ္ ကိုေသ႐ြာကေန ႏႈိးယူၿပီး လူသားကေလးေတြ ရဲ႕ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးမယ့္ႏွင္းလူသား အျဖစ္ ဖန္တီး ေပးလိုက္ပါတယ္….
ဂ်က္ဖေရာ့ဒ္ ရဲ႕ အတိတ္ဘ၀ မွတ္ဉာဏ္ကို ေဖ်ာက္ထားခဲ့တဲ့အတြက္၎ ကိုယ္တိုင္ စိတ္ထားေကာင္းမြန္တဲ့ ေကာင္ေလး တစ္ေယာက္ဆိုတာ မသိခဲ့ပါဘူးဒါေၾကာင့္ သူ႔ကိုသူ နတ္ဆိုး တစ္ေယာက္လို႔ မွတ္ယူၿပီး ေလလြင့္ေနတုန္းဆန္တာကေလာ့ တို႔ အက္စတာဘန္နီ တို႔ အျပင္ အိပ္မက္ဖန္ဆင္းရွင္ သဲလူသား နဲ႔သြားနတ္သမီး တို႔ ကို ေတြ႕ဆုံလိုက္ရၿပီး
၎တို႔ နဲ႔ အတူ ကေလးေတြ ရဲ႕ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ ယုံၾကည္မႈ ကိုလိုက္လံ ေဆာင္႐ြတ္ေနရင္း နဲ႔ ကေလးေတြ ကို ညဘက္ အိပ္မက္ဆိုးေတြ ေပးမက္ေနတဲ့Dream Worker နတ္ဆိုး ရဲ႕ ညစ္ပတ္လွတဲ့ လွည့္ကြက္ေတြနဲ႔ သူတို႔ အဖြဲ႕ ေတြ႕ႀကဳံလိုက္ရတဲ့အခါ……